Kutheni iiVidiyo zakho eziHlanganisiweyo ziphosa iMark, kwaye kufuneka wenze ntoni ngayo | Martech Zone
Sonke siyayazi into umntu ayithethayo xa esithi "ividiyo yequmrhu." Kwithiyori, eli gama lisebenza kuyo nayiphi na ividiyo eyenziwe ngumbutho. Kudala yayiyinkcazo engathathi hlangothi, kodwa ayisasebenzi. Kule mihla, uninzi lwethu kwintengiso yeB2B luthi ividiyo eqokelelweyo ngento encinci yokuhlekisa.
Kungenxa yokuba ividiyo yequmrhu ibland. Ividiyo edibeneyo yenziwe ngamanqaku esitokhwe abantu abasebenza nabo abanomtsalane ukusebenzisana kwigumbi lenkomfa. Ividiyo edibeneyo ibandakanya i-CEO ebila ifunda amanqaku ebhulethi kwi-teleprompter. Ividiyo edibeneyo kukuphinda ubuye umcimbi oqala ngokufumana abantu amagama abo etafileni kwaye uphele ngokuqhwaba izandla kubaphulaphuli.
Ngamafutshane, ividiyo yequmrhu iyadika, ayisebenzi, kwaye yinkcitho kuhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa.
Imibutho yamashishini ayigwetywanga ukuba iqhubeke nokwenza Iqumrhu iividiyo. Njengomthengisi, unokukhetha ukwenza iividiyo ezibandakanyekayo, ezisebenzayo, kunye nokuzisa iziphumo zokwenyani.
Kukho amanyathelo amathathu aphambili ekufuneka uwalandele ukuqala uhambo lwakho kude ividiyo eqokelelweyo kwaye ungene ukuthengisa ividiyo esebenzayo:
Gcina imali yoyilo.
Thembela abaphulaphuli bakho.
Inyathelo 1: Qala ngesicwangciso
uninzi Iqumrhu Ukucwangciswa kwevidiyo kuqala ngamagama amane alula: Sifuna ividiyo. Iprojekthi iqala ngeqela esele ligqibe kwelokuba ividiyo yeyona nto ifunekayo kwaye inyathelo elilandelayo kukwenza loo nto.
Ngelishwa, ukutsiba ngqo kwimveliso yevidiyo kweqa awona manyathelo abalulekileyo. Iividiyo ezihlanganisiweyo zizalwa ngenxa yokunqongophala kwesicwangciso sevidiyo esicacileyo, esizinikeleyo. Iqela lakho lokuthengisa alizukungena kwiqonga elitsha loluntu okanye kwinkxaso yomsitho ngaphandle kwesicwangciso kunye neenjongo ezicacileyo, kutheni le nto ividiyo yahlukile?
Umzekelo: Umault -Ubanjiswe kwiVidiyo eHlanganisiweyo
Ngaphambi kokuntywila kwimveliso yevidiyo, thatha ixesha lakho usebenze ngesicwangciso sevidiyo. Ubuncinci, qiniseka ukuba ungaphendula le mibuzo ilandelayo:
Yintoni injongo yale vidiyo? Ingena phi kuhambo lwakho lwabathengi? Enye yezona mpazamo zinkulu zikhokelela Iqumrhu ividiyo ayicacisi ukuba ividiyo yehla phi kwi-faneli yentengiso. Ividiyo isebenza ngeendima ezahlukeneyo ngokwamanqanaba ahlukeneyo ohambo lwabathengi. Ividiyo ekumgangatho wokuqala kufuneka ikhuthaze abaphulaphuli ukuba baqhubeke nokuzibandakanya nophawu lwakho. Ividiyo ekuhambeni kwexesha kufuneka iqinisekise umthengi ukuba wenza isigqibo esifanelekileyo. Ukuzama ukudibanisa ezi zinto zimbini kukhokelela kwi ukungangqinelani okungafaniyo.
Ngoobani abaphulaphuli ekujoliswe kubo kule vidiyo? Ukuba uphindile abantu abathengi, zama ukukhetha enye ukuba ufikelele kwividiyo enye. Ukuzama ukuthetha nomntu wonke kukushiya ungathethi namntu. Unako ukwenza iinguqulelo ezininzi zevidiyo ukuze uthethe nabaphulaphuli abahlukeneyo.
Iza kusetyenziswa phi le vidiyo? Ngaba ibambelela kwiphepha lokufika, ithunyelwa kwii-imeyile ezibandayo, ivula iintlanganiso zentengiso? Ividiyo lutyalomali olukhulu, kwaye iyaqondakala into yokuba abathathi-nxaxheba bafuna ukukwazi ukuyisebenzisa kwiimeko ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Nangona kunjalo, ividiyo kufuneka ithi kwaye yenze izinto ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwifayile ye- umongo Iza kusetyenziswa kwiVidiyo kwimidiya yoluntu kufuneka ibe mfutshane, ngqo, kwaye ifike kwinqanaba lokubandakanya ababukeli ukuze bayeke ukuskrola. Ividiyo yephepha lokufika ijikelezwe yikopi enika zonke iinkcukacha ezinokufuna.
Cinga ngokwenza iinguqulelo ezininzi zevidiyo kusetyenziso olwahlukeneyo. Owona mqhubi mkhulu weendleko ekwenzeni ividiyo yimihla yeemveliso. Ixesha elongezelelweyo elichithwe ukuhlela uguqulelo olwahlukileyo okanye ukunqunyulwa okujolise kuko yindlela efanelekileyo yokufumana imayile engaphezulu kwindawo yakho.
Ukuthatha ixesha lokucacisa iqhinga lakho, nokuba liqela lakho okanye iarhente yakho, icacisa into ekufuneka yenziwe yile vidiyo nokwenza. Oko kukodwa kuthatha elona nyathelo likhulu kude nomhlaba "wobumbano", kuba uya kuqinisekisa ukuba ividiyo inomyalezo ocacileyo, ujolise kubaphulaphuli, kunye nenjongo.
Inyathelo 2: Tyala imali kuYilo
uninzi Iqumrhu Iividiyo ziphinda ziphinde ziphinde zisebenzise iitrophu ezidiniweyo ezifanayo. Zingaphi iividiyo ozibonileyo eziqala ngelanga liphuma ngaphezulu koMhlaba, emva koko usondeze kwisitrato esiphithizelayo esinendawo ezinabahambi ngeenyawo, umqondiso Uqhagamshelo? Ewe. Ezi vidiyo kulula ukuzenza kwaye kulula ukuzithengisa xa kusenziwa izigqibo, kuba ungakhomba kwimizekelo yesigidi yazo. Bonke abakhuphisana nabo bazenzile.
Kwaye yiyo loo nto kungasebenzi. Ukuba bonke abakhuphisana nabo banevidiyo ngendlela efanayo, ungalindela njani ukuba ube nokukhumbula ukuba yeyiphi eyakho? Ezi vidiyo zilityelwe kwangoko emva kokubukelwa. Amathemba enza ukukhuthala kwawo kwaye ayaphanda kunye nabo bonke abakhuphisana nabo. Oko kuthetha ukuba ubukele ividiyo yakho kanye emva kokhuphiswano lwakho. Kuya kufuneka wenze ividiyo eyenza ukuba amathemba akukhumbule.
Ukuba uwenzile umsebenzi wakho wasekhaya kwaye wenze isicwangciso esibanzi sevidiyo, usenokuba sele unombono wendlela yokuzibandakanya yokufumana umyalezo wakho. Into emnandi malunga nesicwangciso sevidiyo kukuba kunjalo ishenxisa iindlela zokuyila kwimpikiswano. Umzekelo, nje ukuba wazi ukuba ufuna ukwenza isigqibo sevidiyo ye-CIOs kumashishini akumgangatho wamashishini, unokucwangcisa ukwenza ividiyo yobungqina ukuze ubaqinisekise ukuba bakwinkampani elungileyo. Unokuphelisa naziphi na izicwangciso zokwenza imveliso yokuhamba ividiyo okanye inqaku elikhuthazayo lebrendi. Ezo vidiyo beziza kusebenza ngcono ngaphambili kuhambo lwabathengi.
Umzekelo: iDeloitte-iZiko loMyalelo
Umbono wokuyila akufuneki ube kukuqaqamba kwenqanaba likaChristopher Nolan. Into ofuna ukuyenza kukufumana indlela yokuthetha ngqo kubaphulaphuli bakho ngendlela ebandakanyekayo nengenakulibaleka.
Ukutyala imali kuyilo kugqitha nje umbono wevidiyo. Ividiyo eyomeleleyo yokuthengisa ye-B2B ifuna iskripthi esibandakanyekayo kunye nombono ocacileyo obekiweyo ngeebhodi zamabali ngaphambi kokuba imveliso iqale. Ividiyo "yomdibaniso" ihlala i-a) ayibhalwanga okanye b) uluhlu lweendawo zokuthetha ezikotshiweyo kwaye zancanyathiselwa kwifomathi yeskripthi.
Iividiyo ezingabhalwanga zinokuba namandla, kuxhomekeke kwibali ofuna ukulibalisa. Isebenza kakuhle kubungqina okanye ibali elinemvakalelo. Okungabhalwanga akulunganga kangako kulwaziso lwemveliso okanye kwindawo yophawu. Xa umbono wevidiyo u udliwano-ndlebe ne-CEO, emva koko ukhuphela ubuchule kwi-CEO kunye nomhleli wevidiyo ekufuneka eyidibanisile ukuze ibe yinto edibeneyo. Oko kukhokelela kumaxesha amade emveliso nasemva kokuphosa amanqaku aphambili.
Umbhali olungileyo unokwenza imimangaliso yokuguqulela amanqaku akho okuthetha kwifomathi yevidiyo. Ukubhalwa kweskripthi sevidiyo sisakhono esikhethekileyo esingabo bonke ababhali beekopi. Uninzi lwababhali bakwinkcazo, babalasele ekuboniseni umxholo ngokubhaliweyo. Akukho mfuneko yokuba zibalasele ekuboniseni umxholo kwindawo yeaudio / yokubonwayo. Nokuba unababhali beekopi abangaphakathi endlwini kwiqela lakho lentengiso, cinga ukubandakanya umbhali wengcali weevidiyo zakho.
Inyathelo 3: Thembela abaphulaphuli bakho.
Ndiphulukene nokubala kwenani lamaxesha esivile ingxelo yeli:
Sithengisa kwii-CIOs. Kufuneka sibekho ngokoqobo kungenjalo abayi kuyifumana.
Andivanga? Ngaba uthi iiCIOs zamashishini amakhulu zifuna yonke into ipelwe wona? Emva koko, uza kuthi abantu abazithandi iiphazili okanye iinoveli eziyimfihlakalo.
Ukuthemba abaphulaphuli bakho kuthetha ukukholelwa ukuba banengqondo. Ukuba balungile kwimisebenzi yabo. Ukuba bafuna ukubukela umxholo obonwabisayo. Abaphulaphuli bayazi ukuba yintengiso. Kodwa xa kufuneka ubukele iintengiso, awuyithandi indawo ehlekisayo yeGEICO kwintengiso eyomileyo yokuthengisa imoto?
Ukuba abaphulaphuli bakho baxakekile (kwaye ngubani ongekhoyo), banike isizathu sokuchitha ixesha bebukele ividiyo yakho. Ukuba iphinda iphindaphinde amanqaku eebhulethini kwiphepha lakho lokuthengisa, baya kuthi emva koko bakwazi ukuyifunda. Ividiyo eyomeleleyo inika ababukeli isizathu sokuchitha imizuzwana engama-90 yosuku lwabo kuyo.
Ividiyo eyomeleleyo yeyokubandakanya abaphulaphuli bakho, ebenza bacinge, kwaye ibazisele ixabiso elongezelelweyo. Inika into engenakufunyanwa kwiphepha lokuthengisa okanye kwi-infographic. Iividiyo zakho ze-B2B akufuneki zikwazi ukubekwa endaweni yePowerPoint.
Umzekelo: INuance-Thina, abaThengi
Ividiyo edibeneyo ikhule kwindawo elungileyo. Njengokuba ividiyo yayifikeleleka ngakumbi njengonxibelelwano, amashishini afuna ukutsiba kuloo mkhuba. Ngoku le vidiyo iyimfuneko kwintengiso yanamhlanje, qiniseka ukuba wenza iividiyo ezikhulisa intengiso kunye nokuzisa i-ROI ebalulekileyo. Corporate ividiyo ayizukufikelela apho. Ividiyo enesicwangciso esicacileyo, ubuchule bokuyila, kwaye ethembele kubaphulaphuli bayo.
Khuphela isikhokelo sethu esipheleleyo malunga neengcebiso malunga nokubaleka umgibe wevidiyo ehlanganisiweyo:
Iindlela ezi-7 zokuthintela ukwenza ividiyo edibeneyo
tags: Ividiyo yeshishiniividiyo eqokelelweyoukuthengisa ividiyo ngokudibeneyodeloitteUbungakananiumaultukuthengisa ividiyoiindlela zokuthengisa ividiyoiqhinga lokuthengisa ividiyoIsicwangciso sevidiyoiividiyo zeshishini